Ma Ananda Mayi ghọtara dị ka onye senti kachasị ukwuu nke India na narị afọ nke 20 - Afrikhepri Fondation
Mọnde, Machị 1, 2021
Ma Ananda Mayi ghọtara dị ka onye nsọ kachasị nsọ nke India nke 20th narị afọ
Cnwere ike ịbụ nwa agbọghọ, ọ fọrọ nke nta ka ọ gụọ akwụkwọ, lụọ di na 13, wee bụrụ otu n'ime ndị isi mmụọ kachasị mma na narị afọ nke 20 India? N’ebe Chineke n’onwe ya dika onye guru, o gha enweta n’udo na ndu ya nke idi nso ga eweda ngbanye ugwu na ala niile.
Gaa na ọrụ pụrụ iche na agụmakwụkwọ niile
NTỤKWU: "Ọkụ na-ere ọkụ, na-agba anyị ọkụ ma ọ bụrụ na anyị abịaruo ya nso, ma anyị na-achọ ya ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọ bụrụ na ị bịakwute Chineke ahụ n'amaghị ya, ọ bụ otu ihe ahụ. N'ezie, ihe akpọrọ na ice ahụ agaghị agba ọkụ ozugbo. Ma ọkụ ga-egbu ya. Ọ bụrụ na ị bịaruo nso na Chineke bi n'ime ya, o nwere ike ịhapụ gị ... ": Ndị niile bịakwutere Ananda Moyi, otu n'ime ndị kasịsị nsọ mara amara na India, nwere ume ọkụ a na-ere ọkụ. Chineke site na okwu na ọnụnọ nke onye ụfọdụ n'ime ndị na-eso ụzọ ya na-atụle dịka otu n'ime ọganihu nke nne mama Hindu.
(...) Gini bu kwa ihe di iche na onye aju anya dika avatar bu na o choghi ka guru, dika omenala na Hindu; Omume ya na-egosi na enweghị onye nwe ya. Ọ ga-aza otu n'ime ndị na-eso ụzọ ya otu ụbọchị na ndị mụrụ ya na di ya bụ ndị nduzi ya. Na ịgbakwunye: "Ugbu a, n'ọnọdụ niile nke ndụ, mmadụ niile na ihe niile dị n'ụwa a bụ guru m. Mana otu ihe doro anya: Onye Kasị Elu bụ nanị onye nduzi niile. "
(...) Ọ bụrụ na anyị chọrọ ichikota ozizi a, anyị nwere ike ikwu na ọ dabeere n'ụkpụrụ a dị mkpa: "Ọ bụ naanị Chineke (Onwe) nọ n'ebe niile. Ọ bụ nanị ya bụ "N'ihi Ma, n'eziokwu, naanị ihe kwesịrị site ala mmasị bụ ọchịchọ nke Chineke". Chineke dị adị nakwa m hụrụ, "bụ nkebi ahịrịokwu dị ka a mantra, kwesịrị Central ka ndụ nke nwoke ọ bụla.
Ma Ananda Mayi (ma ọ bụ Mayee ma ọ bụ Moyi) kwenyere n'ụzọ zuru ezu dịka onye nsọ kachasị ukwuu nke India nke narị afọ 20th. Ọ bụ n'ezie a avatar cosmic.
Ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ewuwo ọtụtụ ashrams nile na India; eto eto, o nwetara ihe ole na ole; mgbe e mesịrị, ọ bịara pụta na ọ maara ha niile; ọ naghị akụzi ihe kama ọ zara naanị ajụjụ ndị a, n'uche ndị jụrụ ha.
Ọnụnọ ya nyere ndị bịakwutere ya karịa ihe ọ bụla nkuzi.
Ma Ananda Mayi mụrụ n'okpuru aha nke Nirmala Sundari Devi April 30 1896 ka Tripura na East Bengal, ugbu a akụkụ nke Bangladesh.
Ndị mụrụ ya bụ ndị Brahmans dị nnọọ elu.
Nna ya, mgbe amuchara nwa nwanyi mbu, hapuru ndu ndu, ma onwu nwatakiri ahu mere ka o laghachi nwunye ya.
Mama ya bụ pearl n'etiti ụmụ nwanyị, na-ede abụ na egwu. N'ime ime, ọ na-arọ nrọ mgbe niile na ìhè abanye n'ụlọ ya. Ntufe ahụ weere ọnọdụ n'enweghị ihe mgbu. Ọ mụrụ nwa pearl ọ bụla karịa ya.
Na-eto eto, Ma Ananda Mayi bụ nwata nwanyị, onye enyemaka, enyi na ndị niile, Hindu na Muslim. O sooro papa ya gaa n'ememe okpukpe ma nyere mama ya aka ime ka umuaka amuchara ya.
Ngwa ngwa, ọ gosipụtara oge nke enweghị, na -elegharị anya, na-arụ ọrụ kpam kpam, na-atụ ụjọ na mbido na ọ bụ "onye nwere ọgụgụ isi". Mgbe ahụ ndị ya na ha so ghọtara na ndị a bụ ogologo ntụgharị uche nke ọ na-enweghị onye nwere ike iwepụta ya.
Nwunye ya mgbe ọ dị afọ 13, di ya hụrụ na ọ bụ ezigbo mmadụ ma rịọ ozugbo ka ọ bụrụ onye na-eso ụzọ ya.
Ọ na-enyocha yogas niile n'ime afọ isii, na-enweghị onye isi na-agụghị ederede dị nsọ. Ọ kpọrọ ụzọ a "Lila nke sadhana" ya bụ "egwuregwu Chukwu iji ruo ihe mgbaru ọsọ". Mgbe ahụ, ọ natara aha "Ma Ananda Mayi" ya bụ "Mama jupụtara na obi ụtọ". Ọtụtụ ndị na-eso ụzọ gbakọtara gburugburu ya ngwa ngwa, na 1929, e wuru ashram nke mbụ na Dhaka. Na 1932 ọ gara ugwu ugwu nke Himalaya, ebe e wuru ashram nke abụọ na 1936 na Dehradun.
O mechara gaa India dum ruo ọtụtụ iri afọ iji wetara enyemaka na nkasi obi ime mmụọ; Ejiri otutu ashrams ndi ozo na Calcutta, Benares ... O siri ike iri nri, obi ya na-atu egwu n'ihi ahuike ya, nke di ya uto.
Sai Baba wee gwa ndị bịara abịa hụ ya: “Have hụla Ma Ananda Mayi, kedu ihe ọzọ ị chọrọ? ".
Yogananda wepụtara ya otu isi na ya ama "Autobiography nke Yogi".
Ọ hapụrụ ozu ya na August 28 1982 n'ime Dehradun Ashram.
Ọ kụziiri ihe dị ukwuu site na ọnụnọ ya dị ka okwu ndị a kọrọ. Ọ zara naanị ajụjụ. Azịza ya esiteghị na ọgụgụ isi, kama site na ọkwa dị elu karị, na-achọta okwu kwesịrị ekwesị maka ndị nọ n'ihu ya. N’agbanyeghi na-ekwuputa nkuzi, amamihe, akwukwo nso nke Hindu, o gabigara. O kwuru, “Abụ m onye Hindu, Muslim, Onye Kraịst… ihe ọ bụla ị chọrọ”.
“Enweghị m mmetụta nke ịchọ ọdịmma onwe onye ma ọ bụ nkewa. N'ime m, onye ọ bụla n'ime unu nwere nha anya nha ogo na omimi nke mgbe ebighi ebi ”.
Naanị azịza ole na ole dị mkpa ka a ga-atụle.
“Gịnị bụ ụwa a? Kpamkpam ọ dịghị ihe na-adịgide adịgide; ọ bụ ya mere n'ebe Onye-nwe anyị ka anyị na ọchịchọ ga na-agbalịsi. Kpee ekpere ka ọrụ ahụ sitere na gị ga-adị ọcha maka na ị bụ ngwa ọrụ Ya. Cheta Ya n’ihe niile ị na-eme. Idocha echiche gị, ọrụ gị ga-adị mma karịa. N'ụwa a ị natara otu ihe ma echi ọ nwere ike ghara ịdị. Nke a bụ ihe mere mmụọ nke ọrụ ga-eji me ka ndụ gị dị ndụ; Ya mere, chee na n’ihe niile ị na-eme, Onyenwe anyị na-anabata na ị na-efe Ya. "
Okwu manush (mmadu) na - enweta site na mmadu (uche) na ush (uche), nke na - agba akaebe na edemede na nche nke uche. Nke a gosipụtara na akpọrọ mmadụ ka ọ chọọ ọmụma banyere Onwe ya. […] O doro anya na ahụ mmadụ na-adị ndụ site na iku ume na site n'ebe ahụ na-abịa nhụjuanya. E nwere ụdị ndị njem ala abụọ n'okporo ụzọ nke ndụ: nke mbụ, dị ka onye njem nleta na-achọ ịhụ ụdị ihe niile, na-aga site na ebe ruo ebe, na-amụrụ ụtọ maka obi ụtọ ya site n'otu ahụmịhe na nke ọzọ. Nke ọzọ na-agbaso ụzọ nke dabara na ezigbo adị na nke na-eduga ya n'ụlọ ezi ya, ihe ọmụma nke Onwe. Ọ bụrụ na mmadụ emee njem ahụ maka obi ụtọ ya na site n’ịchọ ịmata ihe, ọ ga-ezute ihe mgbu. Nhụjuanya bụ ihe a na-apụghị izere ezere ruo mgbe ịchọta ụlọ gị. Echiche nke nkewa dị na mgbọrọgwụ nke nhụjuanya n'ihi na ọ dabere na njehie, n'echiche nke abụọ ".
Ma zaghachiri ajụjụ na-agbata n'uche “ụmụ akwụkwọ mmụọ”: A na ekwu na ihe bụ otu onye kwere ma ọ bụ naanị otu onye kwere. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na m kwenyere na prasad (1) na-enye m ngọzi, ọ ga-eme ya, ma ọ bụrụ na ekwenyeghị m ya, ọ gaghị eme ya. Kedu ihe n'echiche ma ọ bụ ezi eziokwu mgbe ahụ?
zaa: “Echiche bụ otu n'ime ọrụ nke uche. Prasad na-eweta ngọzi oge niile, ma ị kwenyere ya ma ọ bụ na i kweghị. Nke a mere m ji adụ ọdụ mgbe niile inye Chukwu nri anyị ga-eri. "
M na-ekwu na n'okpuru ọnọdụ ndị a, ọ bụrụ na nri anaghị adabara, ọrịa ahụ ga-akwụsị ngwa ngwa ma ọ ga-akwụsị njiri.
(1): Inye nri nye Chineke.
ajụjụ: “Selfghọta onwe gị na-adabere na guru ka ọ na-eme n’onwe ya? "
zaa: "Anyị ga-ebugodị ụzọ ghọta na ọ bụ ihe ike guru na-eme ka ike nke ga-eme, na okwu ndị ọzọ anyị nwere ike ịsị na ikike a ga-enweta site na guru [.. ] Somefọdụ ndị na-achọ eziokwu chọrọ ịga n'ihu na-enweghị onye isi, n'ihi na n'ụzọ ha, isi mesiri ike bụ omume onwe onye, ​​n'eziokwu na ha ga-adabere naanị na mbọ ha. Ọ bụrụ na ịlaghachi na isi mmalite nke ajụjụ a, ị ga-ahụ na n'ihe banyere onye na-eme sadhana n'okpuru mkpali nke oke agụụ na onye na-adabere n'ike nke aka ya, Onye Kachasị Elu ga-ekpughe onwe ya. Onwe ya n'uzo puru iche, nihi na ike nke onye obula a […] ihe obula nke apuru ikwu ma obu juo banyere ya adaba na ala nke echiche mmadu, nke kari. "
Banyere ndị ọkachamara, ọ sịrị: “Understandghọta nke ọgụgụ isi pụtara ịbụ onye e doro echiche uche ma na-egbochi gị ịnakwere Eziokwu ahụ. "
“Kedu ka esi zere nsogbu a, oscillation a n'etiti obi uto na obi uto? Ind na-ekpori ndụ n'ime obere ọ joụ ndị a na-adị kwa ụbọchị, mana ị chọghị ịchọpụta isi mmalite ya […]'t hụghị na ụwa a bụ naanị ebe njem na-agafe? Anyị na-ahụ ndị njem ala nsọ ndị ọzọ ebe ahụ. Ebumnuche nke njikọta ikpeazụ bụ Onwe (Atman). Ma nke a ị na-echefu; ị na-amata ahụ gị wee si otú ahụ mepụta njikọ mbụ na usoro nke nsogbu niile nke ndụ […] wayzọ ọpụpụ […] “Chineke dị adị, m ga-achọrịrị ya”, ga-abụrịrị ụdị ndụ nke ndụ gị. "
Ma emewo ka m mara na 1968 ụkpụrụ omume na ashrams ya:
Mgbe onye mere agadi ma ọ bụ onye ka okenye ka na-ekwu okwu, egbochila ha ikwu okwu n’ihe a ka kwuru. Naanị nye echiche gị mgbe a jụrụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ị ga-ekwu n'okwu a, ị nwere ike ịmechaa, naanị gị, gwa okenye gị, "Enwere m ụdị echiche a n'okwu a."
Ọ bụrụ na onye okenye ma ọ bụ okenye na-agwa onye ọzọ okwu, echegbula ya ma ọ bụ tinye aka ma ọ bụ nkata. Ọ bụrụ na ị nwere ihe dị mkpa iji gbakwunye, chere ruo mgbe okenye gị kwusịrị okwu.
Na mkparịta ụka gị na onye gị na ya na-akparịta ụka, emela ihe ọchị ma ọ bụ ịkatọ ndị ọzọ.
Onye ekwesighi ikwu okwu oma ma o bu ihe ojoo banyere onye onye ahu nwere nsogbu.
Ekpela ndị enyi gị ikpe ma ghara isoro ndị ọzọ kwurịta ya.
Ọ bụrụ na mmadụ kparịa gị, ma ọ bụ bo gị ebubo n'ụzọ na-ezighi ezi, chee, "Onyenwe anyị, ị ka kuziri m nkuzi. Ka m nye gị afọ ojuju ọzọ ”. Akpọla onye kpasuru gị iwe asị.
Echela ma obu kwuo ihe ojoo banyere ndi ozo.
Na-ekwu okwu n'eziokwu na okwu.
Na-ekwu okwu ntakịrị, ma naanị mgbe ọ dị mkpa.
Nọgide na-enwe ezi ọnọdụ.
Na-anọ jụụ, dị jụụ, siri ike ma dị njọ
Na-ekwu okwu n'atụghị egwu, na-ejikwa obi ike, na nha nhata maka otu.
Naanị ihe na-emetụ aka na Kasị Elu (paramartha).
Omume gị aghaghị ịdị nro na nṅomi.
Na ihe niile ị na-ekwu, na-eme ihe n'eziokwu na n'eziokwu.
Ọchịchọ maka eziokwu aghaghị ịnọgide na oge ọ bụla. Mgbe agha ndị na-eme ka ịkpa ókè n'etiti ndị dị adị na ndị na-ezighị ezi, site n'aka nna, ntụgharị uche, enyemaka maka ememe okpukpe, ọmụmụ ihe dị nsọ, abụ otuto nye Onyenwe anyị - dịka akara ọbịbịa nke onye ọ bụla - weta mwute maka ihe kachasị mma, mgbe ọ na-agaghị ekwe omume icheta Chineke; n'ihi ya, nzuzu, ezi ihe ọmụma na ahụhụ na-apụ n'anya. Uzo nke mmadu bu ihe choro ime ka Chineke puta. Akuku mmadu bu ichota Chineke.
Site na Florence Quentin
Nwere ike ịkekọrịta ederede a ma ọ bụrụhaala na ị na-asọpụrụ ya, kwupụta onye edemede, isi mmalite, na saịtị ahụ: http://elishean-portesdutemps.com
Copyright les Hathors © Elishean / 2009-2018 / N'Ọnụ Ụzọ nke Oge
Ndị isi ojii bụ mmalite nke mmepeanya
Nwoke nwere ntutu isi dị afọ 8000 nọrọ naanị na Europe, nchọpụta a chọpụtara
Ọbịbịa omenala na nke ime mmụọ
Etu ị ga - esi agwọ onwe gị na aromatherapy - Fabrocini (PDF)